Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga UCID ee Somaliland oo ka hadlay weerarkii Tukaraq (dhegayso) – Radio Daljir
Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga UCID ee Somaliland oo ka hadlay weerarkii Tukaraq (dhegayso)
Janaayo 9, 2018 10:19 b 0
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa soo dhoweeyey la wareegiddii ciidamada Somaliland ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Waxaa uu sheegay deegaanka inuu ka mid yahay Somaliland, ayna dhibaato ka wadeen maamulka Puntland.
Waxaa uu ku tilmaamay tilaabo horay ay u qaadeen ciidamada Somaliland.
Maamuladii kale duwanaa ee soo maray Puntland tan iyo wixii ka dambeeyey xukuumaddii Allaha ha u naxariistee Cabdilaahi Yuusuf Axmed waxaa Somaliland ay ku fidaysay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ay sheegto inuu gumaystihii Ingiriiska uu xuduud uga sameeyey.
Wararkii u dambeeyey ee xaalada deegaanka Tukaraq oo ay ciidamada Somaliland la wareegeen(dhegayso)